Shabaab oo ku jabay weerar ay ku qaadeen saldhigga militeriga Somalia ee Bariire - Caasimada Online
Home Warar Shabaab oo ku jabay weerar ay ku qaadeen saldhigga militeriga Somalia ee...
Shabaab oo ku jabay weerar ay ku qaadeen saldhigga militeriga Somalia ee Bariire
Bariire (Caasimada Online) – Wararka aan ka heleyno gobolka Shabeellada Hoose waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka ay ku dileen dagaalamayaal badan oo ka tirsaa Al-Shabaab, kadib markii ay soo weerareen saldhig ay ciidamada dowladdu ku leeyihiin Bariire.
Saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay inay ka war-heleen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo weerar ku soo ah, isla markaana ay u diyaar garoobeen.
Ciidamada deganaa saldhigga Bariire oo ka tirsan Ururka 143-aad guutada 14-ka Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka ayaa sii baacsaday dagaalamayaashii soo weeraray ee Al-Shabaab, waxayna saraakiisha ciidamadaas sheegeen in illaa 40 KM ay sii raacdeynayeen, isla maraana ay gaarsiiyey dhimasho iyo dhaawac badan.
Taliyaha ururka 143-aad guutada 14-ka Oktoobar Dhamme Axmed Xasan Siyaad ayaa Idaacadda Ciidamadda Qalabka Sida u sheegay in ciidanka xoogga dalka ay Al-Shabaab ka dileen 16 dagaalame.
Sidoo kale Taliyuhu waxa uu sheegay in ugu yaraan 20 kale ay uga dhaawaceen howlgalkii ay uga hor tageen weerarkaas ay Al-Shabaab ku soo qaadeen saldhigga militeriga Soomaaliya ee ku yaalla Bariire.
Taliyaha ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in hadda ay ciidamada dowladdu howlagllo ka dhan ah Al-Shabaab ka wadaan degaano hoos taga degmada Awdheegle, kuwaas oo ay ka midyihiin Shaam iyo Baladul-Aamiin oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose.